09/28/13 ~ Myanmar Forward
နေပြည်တော် ဝဲကြီးရွာက ရဲနဲ့ ပဋိပက္ခ ရွာသား ၁ဝ ဦးကို ဖမ်းဆီးထား
Posted by drmyochit Saturday, September 28, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ညက နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဝဲကြီးရွာမှာ ဒေသခံ ရွာသားတွေ နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုဒ်မ ၃ခုနဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ ဝဲကြီးရွာသား ၁ဝ ဦး က ကျည်တောင်ကန်ရဲစခန်းမှာ သွားရောက်အဖမ်းခံတဲ့အတွက် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီး ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွာသားတွေတင်မကဘဲ ဖမ်းဆီးရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲဝင်တွေကိုပါ စစ်ဆေးပြီး ဥပဒေအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ တရားလိုလုပ်မယ့် နေပြည်တော် ပုပ္ဗသီရိမြို့နယ် ကျည်တောင်ကန်ရဲစခန်းက ရဲအုပ်စိန်သောင်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
“အခုရဲနဲ့ဖြစ်တယ်၊ ရဲတွေအိမ်ပေါ်တက်တယ်၊ ညအချိန်မတော်မှာလာတယ်၊ အဲအတိုင်းပဲ ဟုတ်ပြီ ရဲကိုလည်းစစ်မယ်၊ အဲဒီစစ်တဲ့ဟာအားလုံးက ဥပဒေဝန်ထမ်းဆီရောက်သွားမယ်၊ ဒါတွေဟာ အကုန်လုံးသိမယ်၊ ရဲအပြစ်ရှိမယ်၊ ရွာသားအပြစ်ရှိမယ်၊ ဘက်လိုက်လို့မရဘူး”
ဝဲကြီးရွာက ဒေသခံရွာသားတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့
ဝဲကြီးရွာသား ကိုဇော်လတ်က ရွာသားတွေဖက်ကလည်း ပြန်လည်တရားစွဲသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ကျနော်အပါအဝင် လူ ၁ဝ ဦးက နားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အမှုကိုပြန်ဖွင့်သွားမယ်၊ အခုအချိန်မှာ ထင်ယောင်ထင်မှားပြီးတော့ စွပ်စွဲထားတာရှိပါတယ်၊ အပြစ်ကျူးလွန်တယ် မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာကတော့ ကျနော်တို့ဘက်က အပြစ်ကျူးလွန်ရင် ကျနော်တို့ဘက်က ရဲရဲခံသွားမှာပါ၊ သက်ဆိုင်ရာဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးရွာထဲက လှုံ့ဆော်ပြီးလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဘက်က အပြစ်ကျူးလွန်ရင်လည်း တရားဥပဒေကို ကျောသားရင်သားမခွဲခြားပဲ လုပ်ဆောင်ပေးပါလို့ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောချင်ပါတယ်"
အစိုးရ သတင်းစာတိုက်တွေနဲ့ ပုံနှိပ်တိုက်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ဝဲကြီးကျေးရွာနားက လယ်ယာမြေဧက ၅ဝဝကျော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈၊ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်လောက်က ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီလယ်ယာမြေတွေပေါ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ ယူကလစ်ပင်တွေကို ဝင်ရောက်ခုတ်ခဲ့တဲ့ ဝဲကြီးရွာသား ၆ ယောက်ကို ဇေယျာသီရိမြို့နယ် ရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ထားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ဝဲကြီးရွာမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စဉ် ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကိုဇော်လတ်နဲ့ ရွာသား ၁ဝ ယောက်ဟာ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးကတည်းက တိမ်းရှောင်နေခဲ့ပြီး ဒီနေ့ ကျည်တောင်ကန်ရဲစခန်းမှာ အဖမ်းခံခဲ့တာပါ။
From: RFA Burmese
မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနောက်ဘက် နယ်စပ် ခြံစည်းရိုး တလျှောက်တွင် အိန္ဒိယ BSF များကဲ့သို့ ကင်းလှည့်
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ်တွင် တာဝန်ကျနေသော မြန်မာ့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်စပ် ခြံစည်းရိုး တလျှောက်တွင် အိန္ဒိယ နယ်လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ BSF ကဲ့သို့ နေ့ည မပြတ် ကင်းလှည့်နေကြသည်ဟု မျက်မြင်ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ အရင်တုန်းကတော့ မြန်မာ စစ်တပ်တွေ ခုလို လူပ်ရှားတာမျိုးကို မတွေ့ရဘူး။ ဦးဇင်းတို့ ဟို… အိန္ဒိယ- ဘင်္ဂလာနယ်စပ်မှာ အိန္ဒိယဘက်က နယ်စပ် လုံခြုံရေး စစ်သားတွေ သူတို့လုပ်ထားတဲ့ ခြံစည်းရိုး အနီးမှာ ဒီလို ကင်းလှည့်တာမျိုးကို မြင်ဖူးတယ်။ အခုတော့ မြန်မာဘက်က စစ်သားတွေလည်း ခြံစည်းရိုး တလျှောက် ကင်းလှည့်နေတာတွေကို တွေ့နေရပါတယ်” ဟု နယ်စပ် မီးတိုက်ဒေသမှ ဦးဇင်း တစ်ပါးက ဆိုသည်။
မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း မီးတိုက်နယ်မြေမှာ မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၇ မှ ၄၀ အကြားတွင် တည်ရှိပြီး ယခုအခါ ခမရ ၃၅၃ မှ စစ်သားများသည် အဆိုပါ မိုင်တိုင်အနီး တောက်လျှောက်ကာရံထားသော ခြံစည်းရိုး အနီးတွင် နေ့ည မပြတ် ကင်းလှည့်နေသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ယင်းပြင် မိုင်တိုင်အမှတ် ၄၁ မှ ၄၅ ထိ အောင်သပြေ၊ ခမောင်းဆိပ် နယ်မြေတွင် ခမရ ၅၅၂ က လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူထားပြီး ခြံစည်းရိုး တလျှောက် ကင်းလှည့်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
မြန်မာ- ဘင်္ဂလာနယ်စပ် နဟုန်း နဟမ်းဘက်နှင့် မိုင်တိုင် အမှတ် ၄၈ တည်ရှိရာ ဗန္ဓုကျေးရွာ အနီးတွင်လည်း မခရ ၅၅၂ က လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူသည်ဟု သိရသည်။
ခမရ ၅၅၁ မှ မိုင်တိုင်အမှတ် ၅၈ မှ ၆၅ ထိ တာဝန်ယူထားပြီး အဆိုပါ ဒေသတွင်လည်း အထိုင် လုံခြုံရေးကင်းများ၊ လှည့်ကင်များချကာ နယ်စပ် လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ယခု တည်ဆောက်ထားသော ခြံစည်းရိုးကို ဖြတ်ကျော် သွားလာသူ မည်သူ့ကို မဆိုပါ ပစ်ခတ်ရန် စစ်တပ်က ညွှန်ကြားထားကြာင်း၊ သို့အတွက် နယ်စပ်နေ ပြည်သူများမှာ ခြံစည်းရိုး အနီးသို့ မကပ်ရဲကြကြောင်း ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ အပြောအရ သိရသည်။
အိန္ဒိယ နယ်ခြားစောင့်တပ် BSF သည် ခြံစည်းရိုးကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်သူများကို မကြာခဏ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမူများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသဖြင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသားများ သေဆုံးမူများ ရှိသော်လည်း မြန်မာနယ်စပ်တွင်မူ မြန်မာစစ်တပ်မှ ထိုသို့ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမူများကို မကြားရသေးဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
‘လူဖြူမုဆိုးမ’ အကြမ်းဖက်သမား ဖမ်းဆီးပေးရန် အင်တာပို ကမ္ဘာလုံးချီ တပ်လှန့်မှု ပြုလုပ်
Posted by drmyochit Saturday, September 28, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ကင်ညာနိုင်ငံ နိုင်ရိုဘီမြို့တော်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု သံသယ ရှိနေသော လူဖြူမုဆိုးမဟု အမည်ပေးခြင်းခံရပြီး ခင်ပွန်းသည် ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်သည့် ဗြိတိန်အမျိုးသမီး အကြမ်းဖက်သမားကို ဖမ်းဆီးပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်တာပိုက ကမ္ဘာလုံးချီ တပ်လှန့်နှိုးဆော်မှု ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း Xinhua သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နာတာလီဝဘ်ဟု နာမည်အတု အသုံးပြုထားသော ၂၉ နှစ်အရွယ် ဆမန်သာလုသ်ဝိတ် အမျိုးသမီးကို ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရာဇဝတ်မှုများ ဆက်တိုက် ကျူးလွန်ရန် ကြံစည်မှုများဖြင့် ကင်ညာနိုင်ငံက အလိုရှိနေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ‘အနီရောင် သတိပေးချက်’ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကင်ညာနိုင်ငံက အနီရောင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန် လိုက်ခြင်းကြောင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ တွင် တရားခံပြေး နာတာလီဝဘ်နှင့် သတိပေးချက်များ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ရိုဘီ ဈေးဝယ်စင်တာ တိုက်ခိုက်မှုတွင် ‘လူဖြူမုဆိုးမ’ ဟု ခေါ်ဝေါ်နေကြသည့် ဗြိတိန် အမျိုးသမီး အကြမ်းဖက်သမား တစ်ဦး ပါဝင်ကြောင်း ခန့်မှန်း ပြောကြားမှုများ ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် ကင်ညာ နိုင်ငံ၏ သတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း အရပ်သား ၆၁ ဦး၊ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် ခြောက်ဦး စုစုပေါင်း ၆၇ ဦး သေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၁၇၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် ဈေးဝယ်စင်တာ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးမျှ ပါဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း အယ်လ်ကေဒါ အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်မှု ရှိသည့် အယ်ရှာဘတ် အဖွဲ့က အခိုင်အမာ ပြောကြားလိုက်သည်။
ဈေးဝယ်စင်တာ တိုက်ခိုက်မှုမှ လွတ်မြောက်လာသူ တစ်ဦးကမူ အသားအရောင် ဖျော့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မိမိကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
လူဖြူမုဆိုးမဟု အမည်ပေးထားသည့် ထိုအမျိုးသမီးသည် အရှေ့အာဖရိက နိုင်ငံများအတွင်း လှုပ်ရှားလျက်ရှိသော အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သံသယ ရှိနေကြသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၅ ခုနှစ် လန်ဒန်မြို့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ဗုံးဖောက်ခွဲရေးသမား လေးဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်သော ဂျာမိန်းလင်ဆေး၏ အမျိုးသမီးမှာ နာတာလီဝဘ် ဖြစ်သည်ဟုလည်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်။
အနီရောင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားခံပြေးများကို ခြေရာခံနိုင်ရေးတွင် အင်တာပိုအဖွဲ့၏ ထိရောက်မှု ပြင်းထန်သော နည်းလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ တွင် သတိပေးချက်များ ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ လေဆိပ်များ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရေး စခန်းများတွင် နှစ်စဉ်လူပေါင်း သန်းရာပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်း သွားလာ နေကြခြင်းကြောင့် သံသယ ရှိနေသော တရားခံများ ဖမ်းဆီးမိနိုင်ရေးတွင် ပြည်သူများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးမှာ အရေးကြီးကြောင်း အင်တာပိုအဖွဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးက ပြောကြားသည်။
နာတာလီဝဘ်ကို ယခင်က တရားမဝင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်မှု၊ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်မှုများဖြင့် ပြည်တွင်း တရားခံပြေး တစ်ယောက်အဖြစ် အလိုရှိနေသော်လည်း ယခုအခါ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ တရားခံပြေး တစ်ယောက်အဖြစ် အင်တာပိုက သတ်မှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ တိုက်ခိုက်ခံနေရသည့် ပါကစ္စတန် ငလျင်ဘေးသင့်ဒေသ
ငလျင်ဘေးဒဏ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ပါကစ္စတန်က ဘာလူချီစတန်စီရင်စုမှာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်သားတွေနဲ့ စစ်သားတွေဟာ ခွဲထွက်ရေးသမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံနေရကြောင်း သိရပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့မှာ ပါကစ္စတန် သဘာဝဘေးသင့်ဒေသ စီမံရေးတာဝန်ခံနဲ့ စစ်တပ်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးကို တင်ေ ဆာင်ပြီး ဘေးသင့်ဒေသကို လိုက်ခံစစ်ဆေးနေတဲ့ ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းဟာလည်း ဒုံးကျည်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီး လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ၎င်းနေ့ ညနေပိုင်းမှာပဲ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတွေကိုလည်း သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ တယ်လို့ စစ်ဖက်အရာရှိတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပါကစ္စတန် ငလျင်ကြောင့် လူ ၃၅၆ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး လူ ၆၀၀ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ထိခိုက်မှုမရှိသေး ပေမယ့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘုရားရှိခိုးပြီးမှ ရဲတင်းဖြင့် အသေခုတ်သတ်ခဲ့သူ
Posted by drmyochit Saturday, September 28, 2013, under မှုခင်း | No comments
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့နယ် စစ်ကုန်းအုပ်စု ရေလဲကျေးရွာတွင် စက်တင်ဘာ(၂၆)ရက်က ရဲတင်းဖြင့် ခုတ်သတ်မှု ကြောင့် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားသည့် လူသတ်မှုတစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဟင်္သာတမြို့နယ် စစ်ကုန်းအုပ်စု ရေလဲကျေးရွာနေ ဦးမော်တော်(ခ) ဦးသိန်းကျော်(၅၅)နှစ်သည် အိမ်ပေါ် ၌ စာရင်း လုပ်နေစဉ်တစ်ရွာတည်းနေ ဦးကိုမြတ်လှ(၂၈)နှစ်က ရဲတင်း(၂)လက်ကို ကိုင်ဆောင် လာပြီး ဦမော်တော်၏အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာ ကာ အိမ်ပေါ်ရှိဘုရားအား ရှိခိုးဦးချခြင်း၊ ဦးမော်တော်အား ရှိခိုးခြင်း များပြု လုပ်ပြီး လက်ထဲတွင် အသင့်ယူလာသော ရဲတင်းဖြင့် ခုတ်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဟင်္သာ တမြို့နယ် အမှတ်(၁)ရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
သေဆုံးသူ ဦးမော်တော်(ခ) ဦးသိန်းကျော် (၅၅)နှစ် (ဘ ဦးဟန်ထိန်)သည် ဦးခေါင်းနောက်စေ့နှင့် လည်ကုတ် အကြား အလျား (၆) စင်တီမီတာနှင့် အနံ(၂)စင်တီမီတာခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေရာ၌ပင်ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ အသုံးပြုခဲ့သည့် လက်နက်မှာဗြက်(၅)လက်မခန့်၊ အရှည်(၁)ပေ(၄)လက်မခန့်ရှိသော သစ်သားရိုးလက်ကိုင် တပ်ရဲတင်းဖြင့် ခုတ်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။
ယင်းအမှုတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သည့် တရားခံ ဦးကိုမြတ်လှ (၂၈)နှစ် (ဘ) ဦးအုန်းကြည်အား အပိုင်ရဲစခန်းမှအခင်းဖြစ်ပြီး မကြာမီ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပြည်သူများကူညီမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့၍(ပ)အမှတ် ၂၁၅/၂၀၁၃ ပုဒ်မ(၃၀၂)ဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Saturday, September 28, 2013, under အနုပညာ | No comments
အခု ညီမ မဂ်္ဂဇင်းနဲ့ ဂျာနယ် Cover တွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေပါတယ်။ ပြီးတော့ အင်တာဗျူးတွေ လည်း ဖြေပေး တယ်။ ပြီးရင် ၂၀၁၄ ပြက်္ခဒိန်ရိုက် ဖို့ရှိတယ်။ တိုင်းရင်းဆေး ကြော်ငြာတစ်ခု ရိုက်ဖို့ရှိတယ်။
Dress - Vogue
အေးလှိုင်၊ ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ-၂၇
လှည်းကူးမြို့နယ် ငါးဆူတောင် ကျေးရွာ ကျောက္ကာဒင်ကွင်း မယ်ဇလီကုန်း ကျေးရွာရှိ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့် ခြံ မြေ၌ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း တွင် မယ်ဇလီကုန်းကျေးရွာနေ ရွာသား ခြောက်ဦးက ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ကရု ဏာ (၁) လမ်း (ဋ) ရပ်ကွက်နေ အငြိမ်း စား ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်း ဦး အသက် (၅၀) သည် မယ်ဇလီကုန်း ကျေးရွာအနီးရှိ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင် ပိုင်ဆိုင်သည့် ခြံမြေ၌ ပိန္နဲ၊ သင်္ဘောပင် သစ်မွှေးနှင့် အခြားသီးပင် စားပင်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဆန်း ပိုင်းက စ၍ ဦးစီး လုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြောင်း၊ စက် တင်ဘာ ၂၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မယ်ဇလီကုန်း ကျေး ရွာနေ ဒေါ်ပုမ၊ ဦးကြည်သောင်း၊ ဦးစိုးအောင်၊ ဦးအေးကို၊ ဒေါ်အေးသွယ် တို့ ငါးဦးက ခြံဝင်း အတွင်း သို့ ၀င်ရောက်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ ငုတ်တိုင်များ စိုက်ထူ ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဦးသန်းဦး ကာရံထား သည့် ခြံစည်းရိုးများကို ဖျက် ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရ သည်။
အဆိုပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်၏ခြံမြေမှာ မယ်ဇလီကုန်း ကျေးရွာအနီး ကွင်းအမှတ် ၆၉၃၊ မိုင်တိုင် အမှတ် ခုနစ်မိုင် ခြောက်ဖာလုံအနီး တွင်ရှိပြီး ၅၇ ဒသမ ၆၀ ဧက ကျယ်ဝန်းသည်။
ခြံမြေကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်၍ ဖျက်ဆီးခဲ့သည့် ဒေါ်ပုမပါငါးဦးကို အရေး ယူပေးပါရန် ဦးသန်းဦးက တရားလိုပြု လုပ် တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ (ပ) ၃၇၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၄၄၇/၄၂၇/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး အမှုစစ် ဒုရဲအုပ် သံချောင်းက ၎င်းင်းတို့အား ဖမ်းဆီး ရမိရေး စုံစမ်းလျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ကလေးသူငယ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဘယ်လို ကာကွယ် ဖြေရှင်းမလဲ
Posted by drmyochit Saturday, September 28, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ဇွန် ၂၂ရက်က စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေလောင်းလမ်းထိပ် ဓမ္မာရုံတွင်ပြုလုပ်သည့် မုဒိမ်းမှုရှုတ်ချပွဲတစ်ခု (ဓာတ်ပုံ – ဂျေမောင်မောင် (အမရပူရ))
မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းမှာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးသူငယ် အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားတာတွေဟာ အခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း များပြား လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
သတင်း မီဒီယာတွေ၊ အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်မှာတွေမှာလည်း အများအပြား ရေးသား ဖော်ပြကြ ပါတယ်။
ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုတွေဟာ ရန်ကုန်တိုင်း အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ တ၀န်းမှာ တိုးပွားလာနေကြောင်း၊ ရန်ကုန် တိုင်းမှာ ဆိုရင် ကလေးငယ်တွေ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ၈၈ မှုရှိခဲ့ပြီး အခု ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာလည်း သြဂုတ်လ အထိ ၆၂ မှု ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အာဏာပိုင်တွေက မကြာသေး ခင်က ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းဇယားတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တချို့အမှုတွေဟာ ဖခင်အရင်းဖြစ်သူက ပြစ်မှုကျူးလွန်တာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ အသက် ၁၀ နှစ်၊ ၁၅ နှစ်အတွင်း ကလေးတွေကို အဓမ္မကျင့်မှုဟာ အများဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက် နေ့က ကျင်းပတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း က ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းဒေသ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးက“အသက်မပြည့်သူ ကလေးသူငယ် အဓမ္မကျင့်မှု တွေကို ဖော် ထုတ်ပေးရေးနှင့် တိုင်းအစိုးရက ကလေးသူငယ်တွေ လုံခြုံရေးအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက် ထားသည် ကို သိလိုကြောင်း”မေးမြန်းတဲ့ မေးခွန်းကို နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးက ပြန်လည် ဖြေဆိုရာမှာ ပြောဆိုခဲ့ တာပါ။
ကလေးသူငယ် အဓမ္မကျင့်ခံရမှုတွေ၊ မုဒိမ်းမှုတွေဟာ အရင်တုန်းကလည်းပဲ ရှိခဲ့ပေမယ့် မီဒီယာ လွတ်လပ် မှုတွေ အားနည်းခဲ့တာကြောင့် လူသူမသိကြတာလဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိကာလတွေမှာ ပိုမိုများ လာတယ်လို့ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနတွေ၊ လူမှုအဖွဲ့တွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ပါရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးငယ်တွေကို အဓမ္မကျင့်မှုတွေဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ ၂ ဆ နီးပါး မြင့်တက်လာနေပြီး အထူးသဖြင့် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေကို အဓမ္မကျင့်မှုတွေပါ များလာတယ်လို့ သိရပါ တယ်။
၂၀၀၈ ကနေ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ကလေးငယ် အဓမ္မကျင့်ခံရမှုပေါင်း ၈၈၀ ၀န်းကျင်ရှိတယ်လို့ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ တခုဖြစ်တဲ့ သမာဓိ ဖောင်ဒေးရှင်းက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ လူသူ မသိလိုက်တဲ့ ကလေး သူငယ် အဓမ္မမှုတွေဟာလည်းပဲ အများအပြား ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို တိုးပွားလာရတာတွေဟာ ကလေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးမှု နည်းပါးလာတာ၊ အစိုးရ အာဏာ ပိုင်တွေ ရဲ့ ထိရောက် အောင် တားဆီး ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတာ၊ အရက်သေစာ သောက်စားမှု များပြား လာကြတာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုတွေ၊ ညစ်ညမ်း တဲ့ ဗီဒီယိုခွေတွေ တိုးပွားလာပြီး အလွယ်တကူ ရရှိနိုင် တာတွေ လည်း ပါဝင်တဲ့ အကြောင်း လူမှုအဖွဲ့တွေက ထောက်ပြတာတွေ ရှိပါတယ်။
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးတွေကို အဓမ္မကျင့်တဲ့ အမှုတွေများပြား လာတာကြောင့် ထိထိရောက် ရောက် ကာကွယ်တားဆီး၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် တင်းကျပ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းနိုင်ရေးကို လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တချို့ အပြင် အမျိုးသမီးအရေး ဆောင်ရွက်သူတွေ၊ ကလေးသူငယ် အရေးဆောင် ရွက်သူတွေ က ကြိုးပမ်းလာကြတာလဲ တွေ့ရပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ အဓမ္မကျင့် ခံရမှုတွေကို ကာကွယ်တားဆီး ထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ဥပဒေ တရပ် သီးသန့်ပေါ် ထွက်လာ ဖို့ ဆိုပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွှန့်ကလည်း လွှတ်တော်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လအတွင်း ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။
ဦးသိန်းညွန့် တင်ပြခဲ့တာကတော့ “၁၆ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေကို သားမယား ပြုကျင့်သူအား သေ ဒဏ်ပေးနိုင် မည့် ဥပဒေကြမ်း တခု ပြဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မတချို့ပြင် ဆင်ရေး” ဆို တာပါ။
အဓမ္မမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ ပါ အချက်တချို့ကို ပြင်ဆင် မယ်ဆို ရင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိတဲ့အကြောင်း လွှတ်တော် တာဝန်ရှိသူတချို့က ထောက်ပြ ခဲ့တဲ့ အတွက် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း ခဲ့ရတယ်လို့ ဦးသိန်းညွန့်က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်ဆင်စရာတွေကို ဆောင်ရွက်ပြီးရင် လာမယ့်လွှတ်တော်မှာ ပြန်လည်တင်သွင်းမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အဓမ္မကျင့်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေတချို့ရှိပေမယ့် အဲဒီဥပဒေကို အသုံးပြုမှု အားနည်းတာရယ်၊ ကလေး သူငယ် ကို အဓမ္မကျင့်ရင် ပြင်းထန်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သီးသန့် ဥပဒေ မရှိသေးတာကြောင့် ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုတွေ အတွက် သီးသန့် ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင် နေကြတာပါ။
“ဒီဥပဒေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်လာမယ့် ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ် အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ ကလေးတွေရဲ့ဘ၀တွေကို လုံခြုံမှုပေးခြင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ် လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီဥပဒေ လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော် က ယူဆတယ်”လို့ ဦးသိန်းညွန့်က ဆိုတယ်။
အသက် ၁၄ နှစ်အောက် ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ် ဆိုတာကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုတွေဟာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ တိုးပွားလာနေတာကြောင့် လက် ရှိ ဥပဒေနဲ့ ထိရောက်မှု မရှိတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့် ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့ ဥပဒေမျိုး ရှိသင့်တယ်လို့ ယူဆနေကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာဟာ စာရင်းဇယားတွေအရသာ သိရတာဖြစ်ပြီး စာရင်းမရှိတဲ့ အဓမ္မမှုတွေအများအပြား ရှိနိုင်သေးတယ်၊ ဒါဟာ လက်ရှိ ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာ အရေးယူမှုနဲ့ မလုံလောက်ဘူးဆိုတာ ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီထက် ပြင်းထန်တဲ့ ဥပဒေမျိုးနဲ့ ဟန့်တားဖို့ လိုအပ်နေပြီလို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဒေါ်ညိုညိုသင်းရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ပြည် တွင်း မီဒီယာတချို့မှာ ဖော်ပြကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အလားတူ အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း တချို့ကလည်း ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုတွေအတွက် လက်ရှိပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေဟာ လုံလောက်မှု မရှိသေးလို့ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူကို သေဒဏ်ပေးရေး ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သေဒဏ် ချမှတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်အမျိုးမျိုးတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ တချို့က သေဒဏ် ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆသလို တချို့ကလည်း တသက်တကျွန်း သို့မဟုတ် ကြိမ်ဒဏ်၊ ကြီးမားတဲ့ ပြစ်ဒဏ် တခုခုကို ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆသူတွေရှိပါတယ်။
ဥပဒေ ပညာရှင် ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းကတော့ သေဒဏ် အစား ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးသာ ပေးသင့်ကြောင်း၊ အကျင့် စာရိတ္တ ကို ပြုပြင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုး၊ နောက်နောင် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ သူ့အမှားကိုသူ နောင်တ ရလောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးကို ပေးသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“သူ့ရဲ့အမှားကို တစိမ့်စိမ့် နောင်တရနေတာမျိုး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကို ပြန်ရောက်လာရင် လူတော မတိုးရဲအောင်၊ သူ့ကိုယ်သူ မုဒိမ်းကောင်ပေါ့၊ မုဒိမ်းကောင်မှာတောင် ရိုးရိုး မုဒိမ်းကောင်မဟုတ်ဘူး၊ ကလေးကို အဓမ္မကျင့်တဲ့ မုဒိမ်းကောင်အဖြစ် အမြဲတမ်း သတိရနေစေနိုင်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးပဲ ပေးသင့်ပါတယ်”လို့ ဦးအောင်သိန်း က ဆိုပါတယ်။
မုဒိမ်းမှု (ပုဒ်မ ၃၇၆) ကို ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါ မှုခင်းဖြစ်ပွားရတဲ့ အပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းဆုံး ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်၊ ၁၀ နှစ် ကနေ တသက်တကျွန်း အပြင် ငွေဒဏ်ပါ သတ်မှတ်ပေးဖို့ ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းကတော့ မုဒိမ်းမှုတွေကို ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အခါမှာ တရားလိုဘက်ကပဲ မစဉ်းစားဘဲ တရားခံ ဘက်ကပါ ထည့် သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်၊ ဘာကြောင့် ကျူးလွန်ရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သေချာ စစ်ဆေးပြီးမှ ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
ဦးအောင်သိန်းက “ဒါပေမယ့် တချို့ပြစ်မှုတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား သွားစေတာမျိုး၊ အန္တရာယ် ဖြစ် စေတာမျိုးပေါ့၊ ဥပမာ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်ပြီး လူကိုပါသတ်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ သေဒဏ်ပေး သင့်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
အဓမ္မမှုတွေကြောင့် ကလေးတွေဟာ ဆော့စကားရတာကိုတောင် လွတ်လပ်မှု၊ လုံခြုံမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းတွေကိုလည်း ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်မှာ ပြောဆိုဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ကလေးသူငယ်တွေကို အဓမ္မကျင့်ခံရမှုကနေ ကင်းဝေးစေဖို့ အတွက် မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို သွယ် ၀ိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပညာပေးဖို့ လိုအပ်အကြောင်း၊ အစိုးရ အနေနဲ့လည်းပဲ ကျေးရွာတွေမှာ မှုခင်းပညာ ဟောပြောနေတာ တွေ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့လည်း မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဝင်း က ဆိုပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးရေးဌာန(မြန်မာနိုင်ငံ) (HREIB) ရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်း ကတော့ “ရပ်ရွာတွေက အစ ကလေး တွေ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ယန္တရားတွေထူထောင်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ အစိုးရက ဖွဲ့ပေးတာတွေ မြို့နယ်တိုင်းမှာ ရှိပေမယ့် လက်တွေ့လုပ်တာ အားနည်းပါတယ်၊ တချို့နေရာမှာဆိုရင် အဲဒီအဖွဲ့တွေမှာ ဘယ်သူတွေ ပါလို့ ပါမှန်းတောင် မသိဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း ယန္တရားတွေအနေနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပြီး အစိုးရရယ်၊ လူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ပြည်သူ တွေ အားလုံးက ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အသိပညာပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှသာ မုဒိမ်းမှုတွေ လျော့ကျလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးသူငယ်အဓမ္မမှုကို သေဒဏ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက“သေဒဏ်တော့ မပေးသင့်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ကြီးလေး တဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်၊ သေဒဏ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ဒီအမှုတွေဟာ ပပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အစိုးရ ကရော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းပြီး ပညာပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ စိတ်တွေ နိုးကြား လာ အောင် နိုင်ငံတ၀န်း ပညာပေးနိုင်မှ အောင်မြင်မှာပါ”လို့ ဆိုပါတယ်။
ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုတွေဟာ မလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဖြစ်တဲ့အပြင် ကလေးတွေရဲ့ဘ၀ လုံခြုံမှုတွေကိုပါ ထိခိုက် စေတာ ဖြစ်ပေမယ့် သေဒဏ်ပေးခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်မျိုးသာ ချမှတ်သင့်တယ်၊ ကြီးလေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ဟာ တဖက်မှာ ကာကွယ်ရာ ရောက်သလို တဘက်မှာလည်း လူတယောက်ရဲ့ဘ၀ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုကို မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောတယ်။
သေဒဏ်ပေးတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေမှာ လက်သင့်မခံ ဖြစ်လာကြတာကြောင့် သေဒဏ်ပေးတဲ့ အရာကို ပယ်ဖျက်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတချို့က ကြိုးစားနေကြတယ်လို့လည်း သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်အများစုဟာ ဆင်းရဲပြီး ပညာအခြေခံ နည်းပါးတဲ့ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဖြစ်များတာတွေ့ရပြီး မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူတွေကလည်း ငွေကြေးမပြည့်စုံတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ငွေပေး ကျေအေးဖို့၊ အမှုကို ပိတ်သိမ်းဖို့ ကြိုးပမ်း တတ်ကြပါတယ်။
ဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့ စီးပွားရေး ဆင်းရဲကျပ်တည်းတာ တခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးမှု တွေ နည်းပါးလာတာ၊ ကလေးကို ကလေးလို့မမြင်ဘဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်၊ အသုံးချစရာလို့ မြင်နေတာတွေကြောင့် တိုးပွားလာနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။
ကလေးသူငယ် အဓမ္မကျင့်ခံရတဲ့အမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတခုတည်း မဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အနည်းနဲ့အများ ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စအတွက် တချို့နိုင်ငံတွေမှာ သေဒဏ်ပေးလေ့ ရှိသလို တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ထောင်ဒဏ်တသက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ငွေဒဏ် စတဲ့ ပြစ်ဒဏ်တွေ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာရဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲ ဒီလိုအမှုတွေရှိပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်တာနည်းပါးပြီး တခြား နိုင်ငံတွေကလာကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ကျူးလွန်တာ များတယ်လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်း က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပညာပေးမှုတွေ အားကောင်းတာကြောင့် ထိုင်းလူမျိုးအများစုရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကလေးသူငယ် အဓမ္မမှုတွေဟာ မလုပ် သင့် တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဆိုပြီး အသိတွေ ရရှိထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
“သေဒဏ်ပေး ခြိမ်းခြောက်ရုံနဲ့တော့ ဒီအမှုတွေက ပပျောက်သွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒါဟာ မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေဝင်လာအောင် ပညာပေးမှုတွေ အဓိက လုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်”လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောပါတယ်။
ရှေ့နေ တဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွှန့်ကတော့ “ကလေးသူငယ်တွေကို အဓမ္မကျင့်မှုတွေဟာ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူမှုအသိုင်း အ၀ိုင်း တွေ ကို ပျက်စီးစေတဲ့အတွက် ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းပြီး ကာကွယ်တားဆီးဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် သေဒဏ် ပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေ ရှိဖို့ လိုကို လိုအပ်နေတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး နဲ့ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်နေသူတွေကလည်း ကလေးသူငယ် အဓမ္မကျင့်မှုတွေကို ပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ပေးရင် ပြစ်မှုကျူးလွန်တာ များပြားလာအောင် အခွင့်အလမ်းပေးထားသလို ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သေဒဏ်ပေးမယ့် ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းလာနိုင်ရေးကိုပဲ အားပေးနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကလေးသူငယ် အဓမ္မပြုကျင့်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေဒဏ်ပေးမယ့် ဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ လွှတ်တော်မှာ အဆိုတင်သွင်း မယ် ဆိုရင်လည်းပဲ အမြင်မတူမှု၊ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေ အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာနိုင်တာမို့ တာဝန်ရှိသူတွေ အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူ အပြစ်ပေးမှုတွေ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် တိုက်တွန်း ပြောကြား လိုပါတယ်။ ။
FACEBOOK အကောင့် ကို COMFIRM CODE မတောင်းအောင် ဖွင့်နည်း
Posted by drmyochit Saturday, September 28, 2013, under နည်းပညာ |5comments
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း Facebook အကောင့်အသစ်ဖွင့်တိုင်း Email Confirmation လုပ်လိုက်တာနဲ့
တစ်ခါတည်း အကောင့်ကာ လော့ကျသွားတာတွေ ကြားနေရပါတယ် ..
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း သာမာန်အတိုင်းပဲ Facebook အကောင့်အသစ်တစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ
တကယ်ပဲ Email အတည်ပြုပြီးတဲ့အဆင့်မှာပဲ Fake Name သုံးထားလို့ ဘာညာဆိုပြီး
လော့ကျသွားပါတယ် .. ပြန်ရချင်ရင်တော့ နိုင်ငံခြားက အသိတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီကိုယူပြီး
သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေး FB က Text Message ပို့ပေးခဲ့တဲ့ ကုဒ်ကို ထည့်ပေးနိုင်ရင်တော့ ရကောင်းရနိုင်ပါတယ် ..
အလုပ်လည်း ရှုပ်သလို .. ရနိုင်မယ်မရနိုင်ဘူးလည်း မသေချာ .. နောက်ထပ် လော့ကျနိုင်ခြေ
ဘယ်လောက် နီးစပ်မစပ်လည်း မသေချာဆိုတော့ .. အကောင့်ဖွင့်ကတည်းက
လော့ မ ကျအောင်ဖွင့်နိုင်မယ် နည်းလမ်းတွေကို အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြည့်တော့ ဒီနည်းလေးကို
သွားတွေ့ ပါတယ် .. ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း အကောင့်သုံးလေးခုကို ဖွင့်ကြည့်တာ အားလုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့
အောင်မြင် တာကို တွေ့ရပါတယ် ..
အကောင့် သစ် အတွက် ဘာမှမလုပ်ခင် Browser မှာရှိတဲ့ History တွေ Cookies တွေကို ရှင်းထားလိုက်ပါ
ပထမဆုံး nolockfacebook@gmail.com ဆိုတဲ့ Gmail အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါတယ် .. ပီးတော့
ဖွင့်ထားတဲ့ အကောင့်သစ်ရဲ့ Gmail ကို Sing Out မလုပ်ဘဲဒီအတိုင်းဖွင့်ထားပါတယ်.. ပြီးရင်
Facebook အကောင့်သစ်စဖွင့်ဖို့ Sign Up လုပ်ပါတယ်.
First name Last name နေရာတွေမှာ အင်္ဂလိပ်နံမည်တွေ ထည့်ပေးပါတယ် .. (ကျွန်တော့်တို့ မြန်မာနံမည်တွေက
အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ နံ့မည်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ပုံမတူလို့ Fake Name အဖြစ် Facebook က ယူဆတတ်လို့ပါ )
ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှ Email အကောင့်ထဲကအချက်တွေနဲ့ တူအောင် ထည့်ပေးပါ ..
မွေးသက္ကရာဇ်ထည့်တဲ့နေရာမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက လက်ရှိအချိန်ထိ 18 နှစ်နဲ့အထက်ဖြစ်အောင် တွက်ချက်ပြီး ထည့်ပေးပါ .. ( 13 နှစ်ကျော်ရင်လည်း ရပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ Error တက်တတ်လို့ပါ . )
ကျန်တာတွေကိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ထည့်ပေးသွားပါ ..နိုင်ငံကလည်း လက်ရှိ အဲဒီ Browser က ဖတ်ထား တဲ့ နိုင်ငံ ( မြန်မာနိုင်ငံကဖွင့်တာဆို Myanmar ဆိုတာလေး ပြနေမှာကိုပြောတာ)
ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်ရောက်တဲ့အခါ .. Find Friends ကို မနှိပ်ပဲ Skip လုပ်လိုက်ပါ ..
( Find Friends လုပ်လိုက်ရင် အခြားသော အကောင့်တွေကို လိုက်ချိတ်တာဖြစ်လို့ Spam ရဲ့ လမ်းကြောင်းနဲ့ သွားတူနေလို့ပါ .. )
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ထည့်ပေးရပါမယ် ..
School မှာ အင်္ဂလိပ်လို ကျောင်းတစ်ကျောင်းရိုက်ထည့် အဲဒီအခါ Facebook က သူ့ရဲ့ Database ထဲမှာရှိတဲ့ ကျောင်းကို Result ထုတ်ပေးလာလိမ့်မယ် .. သူဖေါ်ပြလာတဲ့ ကျောင်းတွေထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ရွေးနှိပ်လိုက်ပါ .. ( ကိုယ်ထည့်ချင်တာကို ထည့်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး .. Facebook က သိထားတဲ့ကျောင်းကိုပဲ ရွေးထည့်ပေးလိုက်တာပါ )
University နဲ့ အောက်က အကွက်တွေမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ .. Facebook က ဖေါ်ပြပေးတဲ့ နံမည်တွေကိုပဲ ရွေးပေးလိုက်ပါ .. ( အဲဒါတွေက နောက်မှ ပြင်လည်းရတယ်လေ )
နောက်တစ်ဆင့်မှတော့ Profile ပုံကို Upload တင်ပေးရမှာပါ .. ဒီအဆင့်ကို မကျော်ပဲ ပုံတစ်ပုံတင်ပေးလိုက်ပါ .. ဒါတွေပြီးလို့ Save and continue ကိုနှိပ်လိုက်ရင်
Friends အပ်ခိုင်းတဲ့ အဆင့်ဝင်လာပါတယ် .. ဒီအဆင့်မှာတော့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်လောက်ကို Friend Request လုပ်လိုက်ပါ ....
နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Home ကို ရောက်သွားပါမယ် .. အဲဒီမှာ Search Box ထဲကနေ .. ကိုယ့်ရဲ့ တစ်ခြားအကောင့်တစ်ခု ကို ရှာပြီး Add ပါ .. အဲဒီအကောင့်ကိုလည်း စက်တစ်လုံးကနေ Log in ၀င်ထားပြီး Friend Request လုပ်တာကို ချက်ချင်းပဲ Confirm လုပ်ပေးလိုက်ပါ ..
အဲဒီအဆင့်ပြီးမှ ကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကို ပြန်သွားပါ .. ( Facebook ရဲ့ အပေါ်မှာ ပေါ်နေတဲ့ Go to your gmail ကို မနှိပ်ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ Gmail tab ကို သွားလိုက်တာပါ )
Gmail ထဲမှာ Facebook ကပို့ပေးလိုက်တဲ့ စာနှစ်စောင်ထဲက ပိုစောတဲ့စာ ( အောက်မှာရှိတဲ့စာ) ကိုဖွင့်ပြီး
Complete Sign Up ကို မနှိပ်ပဲ သူပေးထားတဲ့ လင့်ကိုပဲ နှိပ်လိုက်ပါ ..
နောက်ထပ် Tab အသစ်နဲ့အတူ Facebook ပွင့်လာပါမယ် ..
Email Confirm ဖြစ်တဲ့အကြောင်း တက်လာပြီဆိုရင် အရင် facebook ရဲ့ Tab ကို ပိတ်လိုက်ပါ ..
လက်ရှိရောက်နေတဲ့ Facebook ရဲ့ Home မှာပဲ Status လေးတစ်ခုလောက် ရေးပြီး တင်ပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင် .. အကောင့်တစ်ခုဟာ လော့မကျပဲ အဆင်ပြေပြေ အောင်မြင်သွားပါပြီ
ဒီနည်းလမ်းတစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် အသုံးချသွားတာက Browser တွေမှာ မှတ်သားထားလေ့ရှိတဲ့ Cookies ဆိုင်ရာ သီအိုရီအချို့ပါ .. ( ဒါကြောင့် Tab တွေကို မပိတ်ပဲ ထားခိုင်းတာပါ )
ငါးပိ, ယူရီးယား, စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်း, အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ရန်ကုန်မြို့ သံဈေး ရှိ ငါးငပိရောင်းသည့် ဆိုင်တစ်ဆိုင် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ဧရာဝတီတိုင်းမှ ရန်ကုန်သို့ တင်ပို့သည့် ငါးပိရည်ကျိုနမူနာ တမျိုးတွင် ယူရီးယား ပါဝင်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် မည်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်မျှ ပြုလုပ်သွားရန် မရှိသေးကြောင်း ကျန်းမာရေးဦးစီးဋ္ဌာန အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဗဟိုဋ္ဌာန အစားအသောက် ဋ္ဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းဇော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ငါးပိရည်ကျိုနဲ့ပတ် သက်ပြီး လတ်တလောမှာ ဘာမှ ဆက်လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းမှ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ပြီး ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ငါးပိရည်ကျို နမူနာ ၃ မျိုးအား ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဗဟိုဋ္ဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၁ မျိုးတွင် ယူရီးယား တွေ့ရှိကြောင်း အဖြေထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးဗအုပ်ခိုင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ယူရီးယား တွေ့တယ်လို့ပဲ အကြောင်းပြန်ထားတာ။ ဓာတ်မြေသြဇာ တွေ့တယ်လို့တော့ တိုက်ရိုက်မပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ သုံးသပ်မိတာက ဒါက သဘာဝ ယူရီးယား မဟုတ်ဘူး။ သဘာဝယူရီးယားဆိုရင် ၃ မျိုးစလုံးမှာ တွေ့ရမယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ရထားတဲ့ သတင်းအရ ထုတ်လုပ်တဲ့သူတချို့ဟာ ပြင်ပဈေးကွက်ကို ရောင်းဖို့အတွက် သပ်သပ်သိပ်ပြီး၊ သူတို့ အိမ်မှာစားဖို့အတွက် သပ်သပ်သိပ်တာမျိုး လုပ်နေတာရှိနေတယ်” ဟု ဦးဗအုပ်ခိုင်က ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုတွေ့ရှိသည့် ယူရီးယားသည် ဓာတ်မြေသြဇာ ထည့်သွင်းထားခြင်းဟု ယူဆနိုင်ကြောင်းလည်း သူက ဆက်လက် ပြောသည်။
ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာန၊ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှု ဗဟိုဋ္ဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်ဟန်က “နမူနာ နံပတ် ၂ မှာ ယူရီးယား လိုတာထက် ပိုပြီးပါနေတယ်။ ဓာတ်မြေသြဇာ လို့တော့ တပ်အပ်ပြောဖို့ ခက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ငါးကလည်း အမိုးနီးယား ထုတ်တယ်။ ယူရီးယားက အဲဒီငါးထဲကလည်း ထွက်တတ်လို့ပဲ။ ယူရီးယားက စားသုံးတာ ကြာရင် ဓာတ်ပြိုကွဲပြီး အန္တရာယ်မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်ကျတော့ ပြောရခက်တယ်။ ဆရာတို့ဘက်ကတော့ အန္တရာယ် မရှိအောင် ကြိုးစားဖော်ထုတ်နေတယ်။ စစ်ဆေးမှုပိုင်းမှာလည်း Standardize Method တွေ မရှိသေးတာလည်း ပါပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ် ၆ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူ ကာကွယ်ရေးအသင်းမှ ပေးပို့ခဲ့သည့် ယင်းငါးပိရည်ကျို နမူနာများ၏ စစ်ဆေးမှုရလဒ် ရရှိရန် တလကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ယမန်နေ့မှက ပြန်လည် အကြောင်းပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကျန်းမာရေးဦးစီးဋ္ဌာန အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဗဟိုဋ္ဌာနအနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အစားအသောက်များ စိတ်ချလုံခြုံမှု ရှိ၊ မရှိကို ပုံမှန်စီမံချက်နှင့် အထူးစီမံချက်ဟု သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပြီး ပုံမှန်စီမံချက်အနေဖြင့် ၃ လ တကြိမ် ဈေးကွက်အတွင်း သုတေသနပြုလုပ်ကာ အများပြည်သူသိသင့်သော အချက်အလက်များကို သတင်းစာများမှ တဆင့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊ အထူးစီမံချက် အနေဖြင့်လည်း ရရှိလာသည့် သတင်းအချက်အလက်အပေါ် မူတည်၍ နယ်မြေ ဆင်းစစ်ဆေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဒေါက်တာ ထွန်းဇော်က ရှင်းပြသည်။
ဦးဗအုပ်ခိုင်က “ငါးပိရည်ကျို ကိစ္စက အသင်းက ကိုင်တွယ်တာဖြစ်လို့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူထု အသိပညာပေးမှုတွေကို ဆက်လုပ်သွား ဖို့ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူလုပ်တာလဲ ဆိုပြီး ကိုင်တွယ်ဖို့ကျတော့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ငါးပိရည်ကျို လုပ်ငန်းတွေက အများကြီးဆိုတော့ ပညာပေး အစီစဉ်တွေပဲ လုပ်လို့ရမယ်။ စစ်ဆေးအရေးယူလို့ ရဖို့ မလွယ်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
သူကဆက်လက်၍ “ အခုလို သတင်းထွက်လာရင် FDA က နာမူနာကောက် စစ်ဆေးပြီး ကြေညာတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ သူတို့လုပ်ရမှာကို ကျနော်တို့က ၀င်လုပ်ပေးတာပါ။ ဘယ်သူ့တာဝန်လို့ မခွဲဘဲ ကိုယ့်မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆပြီး လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်သွားမယ်။ သူတို့က အစိုးရဋ္ဌာန ဖြစ်နေတော့ အမိန့်တွေ၊ ညွှန်ကြားစာ အဆင့်ဆင့်တွေကို စောင့်နေ ရလို့ ကြာနေတာလား မသိပါဘူး။ အခုနမူနာ စစ်တာဆိုရင် အဖြေရဖို့ ၁ လ ကြာတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယူရီးယားပါဝင်သော အစားအသောက်များကို စားသုံးမိပါက ဦးဏှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး ယူရီးယားပါဝင်မှုများပါက ချက်ချင်း သတိမေ့သည်အထိ ဖြစ်နိုင်ခြင်းများကြောင့် စားသုံးသူများအတွက် ဆေးပညာ သုတေသနနှင့် ပညာပေး အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ရောင်ခြည်သစ် ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းမှ ဒေါက်တာ ကျော်စွာဦးက ရှင်းပြသည်။
ငါးပိရည်ကျို ထုတ်လုပ် ရောင်းချသူ အများစုသည် ငါးပိရည်ကျို ပြုလုပ်ရာတွင် အချိန် ၁ နှစ်၊ ၂ နှစ် စောင့်ရမည့်အစား၊ ၁ ပတ် ကျော် ၂ ပတ် အတွင်း ဈေးကွက်အတွင်း ဖြန့်ချိ ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ငါးအရိုးများကို အချိန်တိုတိုအတွင်း နူးသွားစေရန် ယူရီးယား မြေသြဇာများ ထည့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
အမျိုးသား အစားအသောက် အက်ဥပဒေအရ ပြည်သူလူထု စားသုံးသော အစားအသောက်တွင် အဆိပ်ဖြစ်စေခြင်း၊ ဘေး ဥပါဒ်ဖြစ်စေခြင်းများ တွေ့ရှိရပါက ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ် ၃ သောင်းဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ ချမှတ် နိုင်သည်ဟု သိရသည်။
လေးယောက်မြောက်ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာမှ ဒေသတွင်းဘာသာရေး ဓိကရုဏ်း မဖြစ်ပွားစေ ရန် သက်ဆိုင်ရာ မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေ
မော်လိုက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်ခရိုင်၊ မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ကင်းတပ်ကျေးရွာ၌ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီ အချိန်ခန့်က ဘာသာမတူ လင်မယား စကားများ ရန်ဖြစ် ခဲ့ရာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှ ဇနီးသည်၏ မျက်နှာအား လက်သီးဖြင့် ထိုးနှက် ခဲ့သဖြင့် နှာခေါင်းသွေးထွက်၊ မျက်လုံး ဖုယောင်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိ ရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ခန့်က မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ကင်းတပ်ကျေးရွာနေ အသက်(၃၄)နှစ်အရွယ် မမော်မော်လွင် ဆိုသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ လူနာစောင့်ရှောက်ရန် လိုက်ပါ သွားခဲ့ပြီး ထိုဆေးရုံကြီး၌ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ တံတားဦးလေးရွာနေ ကိုတင်အောင်မင်း ဆိုသူနှင့် မေတ္တာသက်ဝင်ခဲ့ရာမှ သူမ၏ စတုတ္ထမြောက် အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ကင်တပ်ကျေးရွာ၌ အခြေတကျနေထိုင်ခဲ့သည့် အိမ်ထောင်လင်မ ယားဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ထိုလင်မယားနှစ်ဦးသည် စည်းကမ်းမကျသောအချစ်နှင့် နည်းလမ်းမကျသော မေတ္တာကို အခြေခံ တည်ဆောက် ခဲ့ကြသော အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထို လင်မယားနှစ်ဦး သည် အခြေခံ ကိုကွယ်ယုံကြည်မှု ဘာသာတ ရားမှာ အလွန်ခြားနားလျက်ရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။
ထိုသူနှစ်ဦး၏ အိမ်တွင်းရေးပြသနာသည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ကူးဆက်တောက်လောင်ရန် အလွန် လွယ်ကူ သည့် ပြသနာ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လည်း ဒေသခံပြည်သူအားလုံးမှ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ကာကွယ်တားဆီးပေးရ တော့သည်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘာသာ တရား အားလုံးသည် တစ်ဘာသာနှင့် တစ်ဘာသာ လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးသည် အလွန် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်သော အချိန်ကာလကြီးဖြစ်သည်။
ထို့ထက်မက တစ်ဘာသာနှင့် တစ်ဘာသာ လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးတို့သည် အပြန်အလှန် လေးစား လိုက်နာ လျက်ရှိပြီး နိုင် ငံတော်၏ ရှေ့ဆက်ရမည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တာဝန်များကို ညီတူညီမျှ အသီးသီး ထမ်းရွက်နေ သည်ကို မြင်တွေ့ရပေတော့ မည်။
ဘာသာမတူ၊ ယုံကြည်ချက်မတူသည့် လူနှစ်ဦးစုံမက်လာသည့် အိမ်ထောင်ရေးသည် နိဂုန်းမလှနိုင်ဟု ထိုဒေသခံများမှ ဆိုသည်။ ထမ်းပိုးမညီသည့် ၀န်ကို ထမ်းသည့်သူနှယ် ခက်လှပါဘိဟုလည်း ထိုဒေသရှိ အဘိုးအဘွားများမှ ၎င်းအိမ်ထောင် ရေး ကိစ္စရပ်ကို မှတ်ချက်ပြုကြသည်။
ဤကဲသို့သော အခြေအနေ အရပ်ရပ်များကြောင့် မော်လိုက်မြို့နယ်၊ ကင်းတပ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံး၏ အစည်းဝေး မှတ်တမ်း (၃/ ၂၀၁၃) အရ ဘာသာမတူ ဇနီးသည်အပေါ် နိုင်လို မင်းထက်ပြု ကျင့်သည် ဟု ယူဆရသဖြင့် ကိုတင်အောင်မင်း ဆိုသူအား ရပ်ရွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် (၀ါ) ပြစ်မှုကျူး လွန်ရန် ယုံကြည်ရသဖြင့် လိုအပ်သလို အရေး ယူဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံး၏ အစည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များအရ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ဆက် လက်၍ တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တင်ပြချက်အား မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ဘက်လိုက်မှု ကင်းရှင်း မျှတ ရေးတို့ကိုအခြေခံကာ ထိုသူကို ဆက်လက်၍ တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ရေး တို့ အတွက် သဘောတူညီခဲ့သဖြင့် မော်လိုက်မြို့မ ရဲစခန်းသို့ လွှဲပြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ရာ ရဲစခန်းက ထိုသူအား (ပ) ၇၇ / ၂၀၁၃ ခြေချုပ်နှင့် ခံဝန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၁ /(စ) (ဆ) အရ အမှုဖွင့် အရေး ယူဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်း ရဲစခန်းမှလည်း ထိုသူအား လာမည့်လ ၉ ရက်နေ့အထိ ချုပ်မိန့် ရီမန်အား မြို့နယ်တရားသူကြီးထံ ဆက်လက် ၍ တောင်းခံ ရယူထားခဲ့ပြီး ထိုသူ၏ နေထိုင်ရပ်တည်မှု အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ရဲပုံစုံ (၇၁) အရ ကျောက်ဆည်မြို့မ ရဲစ ခန်းသို့ အကြောင်းကြားစာများပေးပို့ထားရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးနှင့် မှတ်တမ်းပြုစုရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းက ''ဆွဲ တင် စစ် စာရင်းကောက်တာ ပြန်ကောက်ဖို့ရှိတယ်။ ဘယ်တော့ ကောက်မလဲ ဆိုတာ မသတ်မှတ်ရသေးဘူး။ လ၀ကနဲ့ နယ်စပ်လုံခြုံကို ပြန်မေးရဦးမယ်'' ဟု ပြောကြားသည်။
ဘင်္ဂါလီ လူဦးရေစာရင်း ကောက်ခံရာတွင် ဘင်္ဂါလီများက ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ရပ်တန့်ထားခဲ့ရပြီး ဘင်္ဂါလီ များက လူမျိုးနေရာတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု ထည့်သွင်းရေးသား ဖော်ပြရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဆွဲ တင် စစ် လူဦးရေ စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်အတွင်းက ပေါက်တောမြို့ နယ်တွင် ကောက်ခံခဲ့ပြီး အဆင်မပြေခဲ့သည့်အပြင် စစ်တွေမြို့နယ်တွင် ဆက်လက် ကောက်ခံရာ တွင်လည်း ဘင်္ဂါလီများက လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် ကောက်ခံရာတွင်လည်း အဆင်မပြေခဲ့သဖြင့် စာရင်းကောက်ခံခြင်းအား ရပ်နားထားခဲ့ရာ ယခုအခါ ပြန်လည် ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကားခပိုတောင်းတဲ့ အကျင့်ဆိုး မပျောက်သေး
သတ်မှတ်ထားသည့်ကားခ များထက် ပိုမိုတောင်းခံသည့်လိုင်း ကားများကို တိုင်ကြားမှုများရှိလာ ပါက အရေး ယူ မှုများ ရှိသော် လည်းယာဉ်လိုင်းအချို့တွင်ကားခ ပိုမိုတောင်းခံမှုများ ရှိနေသေး ကြောင်း ခရီးသည် အချို့၏ ပြော ကြားချက်အရ သိရသည်။
““ကျွန်တော်က ဒဂုံတောင် ကနေ တာမွေကို အမြဲတမ်းစီး တာပါ။ ၁၀၀ ပဲပေးရတဲ့လမ်းကို ၂၀၀ တောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ် လေ မိုးချုပ်ရင် ၃၀၀ ထိတောင်း တယ်။ ကျွန်တော်က ပိုက်ဆံကို နှမြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေဆိုလည်း မပြော ပါဘူး။ အခုကနေ့တိုင်း ၂၀၀ တန် လို့ ၂၀၀ ပေးရတာဆို ဘာမှမဖြစ် ဘူး။ အခုက ငြိမ်နေလို့ သူတို့က ပိုတောင်းတာထင်တယ်”” ဟု ဒဂုံ (တောင်ပိုင်း) မှ တာမွေသို့ဘီအမ် ကားစီး၍ အလုပ်ဆင်းသူတစ်ဦး ကပြောသည်။
မြောက်ဥက္ကလာမှ ဆူးလေ သို့ ပြေးဆွဲနေသော ဘီအမ်ကား များထဲမှ ကားအချို့သည်ဆူးလေ မှ ကုက်္ကိုင်းသို့ ကားခကို ကျပ် ၂၀၀ နှင့် ညနေပိုင်းအချိန်များ တွင် ကျပ် ၃၀၀ အထိ တောင်းခံ မှုများရှိကြောင်း ခရီးသွားများထံ မှ သိရသည်။ ထို့အတူ မြို့တွင်း ပြေးဆွဲနေသော လိုင်းကားများ အနက်အချို့ကားများမှာ မထသ မှ သတ်မှတ်ပေးထားသည့် ယာဉ် စီးခနှုန်းထက် ပိုမိုကောက်ခံမှုများ ရှိနေကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
““ဒီလိုအကျင့်ပျက်တဲ့ကား တွေရှိတာမှန်တယ်။ ဒီလိုကား တွေကို ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ ရုံး ကိုတိုင်လို့ ရပါတယ်။ အဲလိုတိုင်မှ သာ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း အရေးယူလို့ရမှာ။ ခရီးသည်တွေ ဘက်ကလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်မှ ကျွန်တော်တို့ဘက်လည်း ဆောင် ရွက်ရတာအဆင်ပြေမှာပါ”” ဟု မထသရုံးမှ တာဝန် ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထက်ပိုမိုတောင်းခံ သည့် ကားများကို ကားနံပါတ် နှင့် လိုင်းအား မှတ်သားပြီး တိုင် ကြားမည်ဆိုပါက အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မထသက ပြောသည်။
နေပြည်တော် ဝဲကြီးရွာက ရဲနဲ့ ပဋိပက္ခ ရွာသား ၁ဝ ဦးကု...
‘လူဖြူမုဆိုးမ’ အကြမ်းဖက်သမား ဖမ်းဆီးပေးရန် အင်တာပိ...
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ တိုက်ခိုက်ခံနေရသည့် ပါကစ္စတန်...
စိတ်ညစ်နေချိန်မှာ Shopping ထွက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲလ...
ငါးပိတွင် ယူရီးယားပါဝင်မှု တွေ့ရသော်လည်း အရေးယူရန် ...